गाँजामा हौसिएका खतिवडा खोपमा किन सुस्तिए? – Health Post Nepal
२०७८ माघ १४ गते ९:१०
सञ्चारमाध्यममा सधैंजसो छाइरहने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा अनुप सुवेदीले गत माघ ६ गते सामाजिक सञ्जालमा ट्वीटरमा लेखे–हिजो स्वास्थ्यकर्मीको बुस्टर खोप लगाउन ११ बजे टेकु अस्पताल पुगें। २ बजेपछिमात्र दिने भनियो। अनि वयोधा र त्यहाँ नपाएपछि शहीद स्मृति अनि त्यहाँ पनि नपाएपछि फेरि २ बजे टेकु गएँ। पाइएन। हाल बेकामे, फुर्सदिलो अनि आफ्नै वाहन भएको मत धाइरहुँला। तर कति स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यस्तो सुविधा होला?’
त्यसपछि उनले जे कुरा लेखे, त्यो हालको खोप व्यवस्थापन र सुस्तताकै सजिव चित्र थियो। र, यो अवस्था खोप केन्द्र तोकिएका अस्पतालहरुमा दिनहुँ दोहोरिइरहेका छन्।
डा सुवेदीले लेखेका थिए, ‘मैले हिजो भन्न छुटाएको कुराचाहिँ टोकन लिए, फारम भरेर घण्टौंसम्म संक्रमणको ठूलो जोखिमलाई झेल्दै लाइनमा बसेर पनि अन्त्यमा रित्तोहात फर्काइएका सर्वसाधारणको अवस्था झन् हृदयविदारक थियो। आज पनि टेकु अस्पतालमा भीड, छटपटी, अस्तव्यस्तता उस्तै थियो।’
डा सुवेदीले लेख्नु ३ दिनअघि स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले मोरङमा पुगेर उच्च प्राथमिकताका साथ खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको बताएका थिए। माघ ३ मा समाजवादी प्रेस संगठनले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले खोप अभियान सात वटै प्रदेशमा तालिका बनाएर अझ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने नीति सरकारको रहेको र खोपको समस्या नरहेको बताएका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक तथ्यांकअनुसार सरकारसँग अहिले करिब १ करोड खोप मौज्दात छ। र, समग्र जनसंख्यामा करिब ४३.६ प्रतिशतले मात्र डबल डोज खोप पाएका छन्। १८ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका ८२.४ प्रतिशतले कम्तिमा पनि एक डोज लगाएका छन् भने दुवै डोज लगाउनेको संख्या ६६.५ प्रतिशत छन्। बाँकीले लगाउन बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकले खोपमा सहज पहुँच पाउन सकेका छैनन्। सीमित संख्यामा तोकिएको केन्द्र र सरकारी अव्यवस्थाकै कारण अहिले सरकारले दैनिक बढीमा २ लाखभन्दा बढी डोज दिन सकेको छैन। नागरिकहरु अझै पनि खोपका लागि भौतारिइरहनुपर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्यमन्त्रीले भनेजस्तो मन्त्रालयले न तालिका बनाएको छ, न सहज खोपको व्यवस्था।
डा सुवेदीले भनेजस्तै अवस्था वीर अस्पतालमा पनि देखिन्छ। यहाँ पनि ‘जीवन बचाउने’ आशा लिएर खोप लगाउन दैनिक सयौं सर्वसाधारण बिहानैदेखि लाइन बसेका हुन्छन्। दिन ढल्कँदै जाँदा लाइन बसेका मानिसहरुका अनुहारमा थकान र गलानका रेखाहरु प्रष्ट हुँदै जान्छन्। तै पनि एक डोज खोपको आशा बाँकी नै रहन्छ। तर, २ बज्दानबज्दै खोप सकिएको घोषणा गरिन्छ। र, त्यो भीड भोलिको अनिश्चिततामा तितरबितर हुन्छ।
बुधबार तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार काठमाडौंको जनसंख्या २० लाख १७ हजार ५ सय ३२, ललितपुरको ५ लाख ४८ हजार ४ सय १ र भक्तपुरको ४ लाख ३० हजार ४ सय ८ छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा अहिले १६ लाख ६७ हजार ५ सय ६ डोज खोप स्टकमा छ। अहिले सरकारले बुस्टर डोज लगाउन उपत्यकामा जम्मा १७ वटा खोप केन्द्र तोकेको छ। तिनमा केही निजी तथा सरकारी अस्पताल छन्।
डा अनुप सुवेदीले भनेजस्तो अहिले बुस्टर डोज लगाउनैका लागि ती अस्पतालमा ठूलो भीड छ। मानिसहरु ओमिक्रोन संक्रमणको समेत वास्ता नगरी अस्पतालमा ओइरिइरहेका छन्। यस्तोमा खोप केन्द्र थप गर्नेतर्फ न त स्वास्थ्य मन्त्रालयले वास्ता गरेको छ, न स्थानीय निकायले। तर, मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा संगीता मिश्रा भन्छिन्, ‘जिल्ला र प्रदेश सरकारहरुले जनसंख्याको आधारमा खोप केन्द्र थप्ने अधिकार दिइएको छ।’
कति छ सरकारसँग खाेप स्टक?
स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाका अनुसार सरकारसँग रहेको ४ करोड ३ लाख ८८ हजार ४ सय ४० डोज खोप छ। जसमध्ये १६ लाख ६७ हजार ५ सय ६ खोप काठमाडौंका ठूला अस्पतालमा वितरण गरिएको छ भने बाँकी २ करोड ८२ लाख ३९ हजार सातै प्रदेशका स्टोरमा पठाइएको छ। उनका अनुसार समग्रमा अहिले ८० लाख डोज खोप स्टक छ।
उनले बिहीबार एक अन्तर्वार्तामा भने, ‘सम्झौता भएका, पैसा तिरेर किनेका, अनुदान या कोभाक्स सुविधाअन्तर्गतका गरी पाइपलाइनमा अब २ करोड डोज खोप छन्।’
यी खोप सकिँदासम्म अरु १ करोड डोजका लागि तयारी गर्न आफूले विभागलाई निर्देशन दिइसकेको पनि उनले बताए। तर, नागरिकहरु वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले लक्षित वर्गका सबैलाई खोप दिने लक्ष्य पूरा भने नहुने उनको भनाइ छ।
कति छ स्वास्थ्य जनशक्ति?
स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्दा खोप व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताउँछन्।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल स्थानीय तहमा २६ हजार, प्रदेश तहमा ३५ सय र केन्द्रमा २६ सय गरी कूल ३२ हजार एक सय स्वास्थ्यकर्मी छन्। सरकारले २०५१ यता स्वास्थ्य संगठन संरचनामा परिवर्तन गरेपछि २ सय चिकित्सक दरबन्दी थप गरिएयता आवश्यक संख्यामा दरबन्दी थप गरिएको छैन। हाल कायम जनशक्तिभन्दा तीन गुणा बढी जनशक्ति आवश्यक रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
चिकित्सक भने १ हजार ६ सय ५० दरबन्दी रहेकोमा १४ सयमात्रै सेवामा छन्। तीमध्ये ५ सय विशेषज्ञ चिकित्सक र करिब ९ सय मेडिकल अधिकृत कार्यरत रहेको बताइएको छ। निजीमा भने करिब ३ हजार चिकित्सक कार्यरत रहेको सरकारी तथ्यांक छ।
विरोध खतिवडाः कुरामात्रै धेरै, गाँजाको वकालत जारी
मुलुक कोरोना महामारीले आक्रान्त बनाइरहेका बेला गत असोज २२ गते स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएका खतिवडा ‘गाँज अभियन्ता’ का रुपमा परिचित छन्। यसबीचमा पनि उनले गाँजाको पक्षमा वकालत गर्न छाडेका छैनन्।
गत २० पुसमा गृहजिल्ला मकवानपुरको मनहरीमा आयोजित एकीकृत समाजवादीको गाउँभेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले गाँजाको व्यावसायिकतालाई जोड दिन सके आर्थिक समृद्धि हुन सक्ने बताएका थिए। उनले गाँजाको चकलेट, कफी, कपडा बनाएर बेच्न सकिने पनि बताएका थिए।
यस्तै, अहिले खोप व्यवस्थानमा चर्को अव्यवस्था रहे पनि उनले खोप केन्द्र थप गरेर भीड हुन नदिने बताउँदै आइरहेका छन्। गत पुस २९ मा कीर्तिपुर अस्पतालमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले विभिन्न अस्पताललाई खोप केन्द्र बनाइएको र अझै थप गरेर भीड हुन नदिने बताएका थिए।
पुस ७ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा उनले छिटोभन्दा छिटो नेपाललाई कोरोनामुक्त पार्ने उद्धेश्यका साथ स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, जनमुखी, सर्वसुलभ र जनउत्तरदायी बनाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताएका थिए। उनले सर्वसाधारणलाई सहज हुने गरी खोप केन्द्रमार्फत् सरकारले निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउँदै आएको बताएका थिए।
यस्तै, गत मंसिर २ गते त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा फाइजर खोप अभियानमा सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन अब कुनै पालो कुर्नु नपर्ने बताएका थिए।